10 manomano ekuti uwane zvakanyanya kubva kune yako AirPods | IPhone nhau
10 manomano ekuti uwane zvakanakira maAirPod ako
AirPods ave akanyanya kufarirwa waya asina waya, uye vanayo. nekutenda kune yayo aesthetics, kuzvimiririra kwayo uye kusangana kwayo kwakaringana neApple ecosystem. Asi vazhinji vevashandisi vayo havazive nezve mikana yese yatinopihwa nemahedhifoni eBluetooth.
Isu tinokuudza iwe muvhidhiyo ino zvese zvaunoda kuti uzive kuti uwane zvakanakisa kubva pamahedhifoni aya, kubva pakuashandisa nawo neApple Watch yako, kuziva bhatiri rayo rasara kana kuishandisa semubatsiri wekunzwa, kune mamwe mabasa sekuita kuti ruzha kana warasikirwa nazvo kana kuzvishandisa neako Apple TV uye Android zvishandiso. Madiki gumi pakati pazvo zvechokwadi pane zvinhu zvawanga usingazive.
Chokwadi unoziva kuti kana iwe ukavhura muvharo weiyo AirPods bhokisi, widget inoonekwa pachiratidziro che iPhone yako kwaunoratidzwa bhatiri remahedhifoni nebhokisi. Asi iwe waizviziva here kuti iwe unogona kuisa widget kuti uione pese paunoda? Unoziva here kuti mavara eiyo LED pane iro bhokisi anorevei? Unoziva here kuona bhatiri reAirPod yako pane yako Apple Watch? Zvese izvi basa zvinobatsira kwazvo uye zvishoma zvinozivikanwa nevashandisi. Sezvazviri, kuchinja pakati peApple Watch ne iPhone kuri otomatiki.
Iwe unoziva here kuti iwe unogona kushandisa iyo AirPods kukubatsira iwe kana iwe uine matambudziko ekunzwa? Kushandisa maikorofoni yako ye iPhone kuteerera mumwe munhu munzvimbo dzine ruzha kunogona kubatsira zvakanyanya dzimwe nguva. Kungobatsira sezvazviri kugona kuziva ndiani arikukufonera nekuita iyo iPhone ikuudze iwe chete kana iwe uine yako AirPods yakabatana, kana kuziva maitiro ekudzora vhoriyamu yeAirPods kuburikidza neako Apple Watch. Iwe unoziva here kugadzirisa zvigadziriso kuitira kuti yega AirPod iite rakasiyana basa kana iwe ukapetera kaviri pairi? Yakarasika AirPod kumba uye ukatadza kuiwana? Isu tinotsanangurawo kuti yako iPhone ingakubatsira iwe nekuita mahedhifoni kuburitsa ruzha. Uye kana iwe uine Android foni, ziva kuti AirPods inoshanda nayo futi. Tarisa uone vhidhiyo iri muchinyorwa patinotsanangudza zvese izvi kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » 10 manomano ekuti uwane zvakanakira maAirPod ako
Alberto Carranza placeholder mufananidzo akadaro
Zvemukati zvakanaka, kunyora kunotyisa.
Pindura kuna Alberto Carranza
Chinhu chekubatsira kana uine matambudziko ekunzwa, Unofanirwa kutora nezvimedu. Zvinogona kubatsira "chimwe chinhu" asi kana uine matambudziko ekunzwa hachisi chekusvitsa ruoko, isa dzimwe AirPods uye ... oohh chishamiso, ndinonzwa !!
Ndine matambudziko ekunzwa uye ndinopfeka, kwete nekuti ndinozvida asi nekuti handina mamwe mahedhifoni eBluetooth, kuchaja zvisina waya uye zvese zvaunoda, yepamusoro-soro iripo (€ 8000 vaviri) uye haisi yekusvika, pfeka …. wanzwa !!
Unoda bvunzo, dzinoenderana newe, mabass, treble nezvimwe ... kusvikira iwe uchinge uchinzwa zvakanakisa,
Zvinoita sekunge maAirPod aive mazana matanhatu uye mahedhifoni maFerrari uye kunyangwe zvakadaro, kufamba kwangu kwakapotsa kurasika uye handinzwe, semuenzaniso, kuimba kweshiri, kuchema kwemwana, nezvimwe.
Kana Apple ikanyepedzera kuita kuti vanhu vane Kunzwa Kurasikirwa vaone kuti vari kuenda kunotenga maAirPod uye zvisina maturo kunzwa, zviri kuvatengesera iwo mudhudhudhu.
Uye pamusoro peizvozvo, sezvo vasina maikorofoni, ivo vanokwanisa chete kunzwa kuburikidza neiyo iPhone. Neni kana ndikanzwa zvakananga (hongu) kana kuburikidza neiyo iPhone mune chaiwo mamiriro (musangano, uye siya nharembozha patafura kuti uswedere padyo nemukurukuri
Pane nzira refu pakati "pekugadzirisa kurasikirwa kwekunzwa matambudziko" uye "kugona kubatsira kana uine matambudziko ekunzwa." Ivo zviri pachena kuti havasi rubatsiro rwekunzwa, asi ivo vanogona kubatsira vamwe vanhu.
Iyo inyaya yekuravira, asi mumaonero angu, chero munhu ane matambudziko ekunzwa anofanira kuigadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona. Ini ndinokuudza kubva pane zvakaitika, paunonyanya kuisiya gare gare, zvinonyanya kuoma kuti unzwisise mazwi uye unovavhiringidza.
Pakutanga paiva nehwamanda uye ivo vakabatsirawo
Apple Inogadza Adrian Perica Mutevedzeri weMutungamiri weKubudirira kweKambani
Apple inoderedza mutengo weiyo HomePod kutenderera pasirese